Dooda Masjidka Borlänge | Somaliska
Beryahaan dambe dood kulul ayaa ka taagan magaalada Borlänge oo ku saabsan [caption id="attachment_1920" align="alignright" width="300" caption="Jan Hjärpe"] [/caption] dalab ay Muslimiinta magaaladaas ku dalbanayaan in loo ogolaado in ay dhistaan Masjid. Magaalada waxaa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen cunsuriyiinta oo looga soo horjeedo Masjidka ayadoo bishii la soo dhaafay uu dagaal ka dhacay goob lagu qabtay shir looga hadlaayay Masaajidka. Jan Hjärpe oo ah qabiir ku taqasusay Islaamka ayaa sheegay ololaha looga soo horjeedo Masaajidka uu yahay mid ay soo abaabuleen koox yar. Mar uu ka qeyb galay shir looga hadlaayay arinta Masjidka Khamiistii ayuu sheegay in dadka ka soo horjeeda Masaajidka ay yihiin koox yar oo xitaa aysan qaarkood deganayn Borlänge. Waxa uu sheegay isla kooxdaan in ay olole midkaan la mid ah ay ka wadaan magaalada Östersund. Jan ayaa aaminsan in aysan jirin cabsi ay bulsha weynta Sweden ka qabto Islaamka asagoo sheegay in kooxyar ay ololaha wadaan lagaga soo horjeedo Islaamka guud ahaan Sweden. Ma ahan markii ugu horeysay oo cunsuriyiinta ay ka soo horjeestaan dhisitaanka Masaajida Muslimiinta ayadoo ay muuqato in uu jiro olole balaaran oo dadka ku abtirsada xisbiga Cunsuriga ah ee SD ay wadaan oo ay kaga soo horjeedaan Muslimiinta Sweden.
Beryahaan dambe dood kulul ayaa ka taagan magaalada Borlänge oo ku saabsan
dalab ay Muslimiinta magaaladaas ku dalbanayaan in loo ogolaado in ay dhistaan Masjid. Magaalada waxaa ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen cunsuriyiinta oo looga soo horjeedo Masjidka ayadoo bishii la soo dhaafay uu dagaal ka dhacay goob lagu qabtay shir looga hadlaayay Masaajidka.
Jan Hjärpe oo ah qabiir ku taqasusay Islaamka ayaa sheegay ololaha looga soo horjeedo Masaajidka uu yahay mid ay soo abaabuleen koox yar. Mar uu ka qeyb galay shir looga hadlaayay arinta Masjidka Khamiistii ayuu sheegay in dadka ka soo horjeeda Masaajidka ay yihiin koox yar oo xitaa aysan qaarkood deganayn Borlänge. Waxa uu sheegay isla kooxdaan in ay olole midkaan la mid ah ay ka wadaan magaalada Östersund.
Jan ayaa aaminsan in aysan jirin cabsi ay bulsha weynta Sweden ka qabto Islaamka asagoo sheegay in kooxyar ay ololaha wadaan lagaga soo horjeedo Islaamka guud ahaan Sweden.
Ma ahan markii ugu horeysay oo cunsuriyiinta ay ka soo horjeestaan dhisitaanka Masaajida Muslimiinta ayadoo ay muuqato in uu jiro olole balaaran oo dadka ku abtirsada xisbiga Cunsuriga ah ee SD ay wadaan oo ay kaga soo horjeedaan Muslimiinta Sweden.